Ady tany ao Analamalotra – Antetezambaro: Mampiaka-peo ny Katolika
jeudi, 04 janvier 2018 21:21
Nampiantso ireo mpino Katolika isaky ny Diosezy, ny solontenan’ny mponina tao Antetezambaro sy Analamalotra, ny Skoto Katolika, ary ny mpanao gazety, tao amin’ny Katedraly Md Jozefa Ampasimazava Toamasina androany ny mpitondra ny Fiangonana eto Toamasina, tarihin’i Arsevekan’i Toamasina Mgr Tsarahazana Désiré, nampahafantatra ny olana sedrain’ny fikambanana Saint Gabriel mikasika ny tany antsoina hoe : “La Redoute, TF 3072-BA” ao Analamalotra Kaominina Antetezambaro, Distrikan’i Toamasina II.
Tanin’ny ministeran’ny fambolena izy io no nomena ny fikambanana, ary nahazoany alalana mazava, izay nohamafisin’ny taratasy nosoniavin’i Rakotovao Rivo, fony ity farany minisitry ny fambolena, tamin’ny 10 aogositra 2017, ary nandoavana hofan-tany nifanarahan’ny fikambanana sy ny fanjakana hatrany, nandritra ny dimy taona izay.
Ankehitriny anefa dia misy olona mitonona fa tompon’ny tany ary mibodo azy. Efa eo anivon’ny Fitsarana efa aman-taonany raharaha fa tsy misy tohiny, tsy misy ny fandraisana andraikitra.
Nahitsy ny tenin’ny Arsevekan’i Toamasina Mgr Tsarahazana Désiré manoloana izany nilaza fa tsy niditra an-tsokosoko tao amin’io tany “La Redoute, TF 3072-BA” io ny fikambanana Saint Gabriel raha tsy nomen’ny fanjakana alalana izy.
Milaza ny tsy handefitra manana ny rariny, ary miangavy ny rehetra hijery akaiky izao tambazotra mpanao bizina tany izao ireo mpino Katolika.
Nantsoin’ny Fiangonana manokana niatrika ity fihaonana tao amin’ny Katedraly Ampasimazava ity ny mpanolotsaina manokan’ny praiminisitra Atoa Mahazaka Clermont.